ဟာသများ Archives - CeleLove
ကြောက်စရာကြီး တောင်ပြုံးမှာ ရဲတွေရှေ့မှာပဲ သွေးအေးအေးနဲ့ ဓားနဲ့ခုတ်ပြီး ပြေးတာ …(ရုပ်သံ)
ကြောက်စရာကြီး တောင်ပြုံးမှာ ရဲတွေရှေ့မှာပဲ သွေးအေးအေးနဲ့ ဓားနဲ့ခုတ်ပြီး ပြေးတာ …(ရုပ်သံ) အပြေးကောင်းတော့ မမိလိုက်ဘူး ၊ လူအုပ်ကြီးကမိရာ ဝိုင်းဆွဲကြတာ တစ်စစီဖြစ်ရော 😳 ကိုယ်လဲ တောင်ပြုံးမရောက်ဖူးတော့ မသိဖူး …။ ဘယ်လိုအယူအဆတွေဆိုတာလဲ နားမလည်ပါ…. သစ်ပင်ကို ပါတ်လျှောက်ပီး ဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တာ အဲ့ဒီသစ်ပင်ကို ၀ိုင်းလုနေလိုက်ကြတာများ […]
ဆေးရုံ ရှေ့မှာ ရောင်းတဲ့ အသုပ်ဆိုင်ကိုဆေးရုံအုပ်ကြီးက သန့်ရှင်းမှု ရှိမရှိ သွားရောက် စစ်ဆေးလိုက်သောအခါ
ဆေးရုံ ရှေ့မှာ ရောင်းတဲ့ အသုပ်ဆိုင်ကိုဆေးရုံအုပ်ကြီးက သန့်ရှင်းမှု ရှိမရှိ သွားရောက် စစ်ဆေးလိုက်သောအခါ ဆေးရုံ ရှေ့မှာ ရောင်းတဲ့ အသုပ်ဆိုင်ကိုဆေးရုံအုပ်ကြီးက သန့်ရှင်းမှု ရှိမရှိ သွားရောက် စစ်ဆေးလိုက်သောအခါ အသုပ် သုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးက အသုပ်ကို နယ်တဲ့အခါ လက်အိတ် မစွပ်ပဲ နယ်တာ တွေ့တော့ […]
အပျိုဖော်ဝင်ခါစ ၁၆ နှစ်သမီးလေး အခန်းထဲကို အဖေတယောက် ဝင်ကြည့်တဲ့အခါ ….
အပျိုဖော်ဝင်ခါစ ၁၆ နှစ်သမီးလေး အခန်းထဲကို အဖေတယောက် ဝင်ကြည့်တဲ့အခါ …. ၁၆ နှစ်သမီးလေး အခန်းထဲကို အဖေတယောက် ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ … သမီးမရှိပဲ အခန်းက သပ်ရပ်နေပြီး စားပွဲပေါ်မှာ စာတစ်​​စောင်​ တင်ထားတာကို တွေ့ လိုက်ပါတယ် …။ စာကို ဖတ်ကြည့်တဲ့ အခါ […]
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လူကြည့်များနေတဲ့ မီတာခတွေ ဈေးတက်လို့ –ာခံထွက်နေရပီဆိုတဲ့ ကောင်မလေး (ရုပ်သံ)
August 19, 2019 Cele Love 0
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လူကြည့်များနေတဲ့ မီတာခတွေ ဈေးတက်လို့ –ာခံထွက်နေရပီဆိုတဲ့ ကောင်မလေး (ရုပ်သံ) ယခုတစ်လော အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လူကြည့်များနေတဲ့ ရုပ်သံလေးတစ်ခုကတော့ မီတာခတွေ ဈေးတက်သွားလို့ စနောက်ပီးရိုက်ထားတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ လမ်းပေါ်မှာ လျှောက်သွားနေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ကောင်လေးတစ်ယောက်က မေးလိုက်ပါတယ် …။ နင်တစ်ယောက်ထဲ […]
ကားပေါ်ရောက်ရင်အိပ်တတ်တာကြောင့်အသက် ၅၀ ဝင်းကျင်ခန့်အဒေါ်ကြီးတယောက်
August 16, 2019 Cele Love 0
ကားပေါ်ရောက်ရင်အိပ်တတ်တာကြောင့်အသက် ၅၀ ဝင်းကျင်ခန့်အဒေါ်ကြီးတယောက် ရန်ကုန်-ပြည်- မန္တလေး Express ကားပေါ်တွင်ဖြစ်သည် ကားပေါ်ရောက်ရင် အိပ်တတ်တာကြောင့်အသက် ၅၀ ဝင်းကျင်ခန့် အဒေါ်ကြီးတယောက်မှ ယဉ်မောင်းအားကား စတင်ထွက်ချိန်တွင် အော်ပြောလေသည် ….။ ” ကားဆရာရေ အုတ်ဖိုတာဆုံရောက်ရင်အဒေါ့်ကိုပြောပါကွယ် ” ” ဟုတ်ကဲ့ ဂျီးဒေါ်ရေ ” ထိုသို့ဖြင့် […]
July 23, 2019 Cele Love 0
ATMစက်ထဲက ကဒ် ပြန်ထွက်မလာတော့ဘူးဆိုရင် ဖြေရှင်းရမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း.. ပြတ်တုန်း လပ်တုန်း ၂၃ ဆိုတဲ့အတိုင်း… ကိုစိုးဝင်းတစ်ယောက် ATM စက်ထဲက ရှိစုမဲ့စုလေး ထုတ်ပါတယ်…ပိုက်ဆံထွက်မလာတဲ့အပြင် ကဒ်ပါဝါးသွားတယ်….။ အဲဒါနဲ့ ဘဏ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးပြောတာပေါ့… ဘဏ်က ရုံးပိတ်ရက်မို့လို့ တနင်္လာနေ့ကြရင်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး ပြန်ဖြေပါတယ်…။ ကိုစိုးဝင်း ဘဝင်မကျနိုင်ဖြစ်ပီ … ။ […]
မြောက်ဥက္ကလာကဖြတ်သူတိုင်း ကုသိုလ်ရစေတဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ပြတင်းပေါက်ပါသောတံတား….
June 30, 2019 Cele Love 0
မြောက်ဥက္ကလာကဖြတ်သူတိုင်း ကုသိုလ်ရစေတဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ပြတင်းပေါက်ပါသောတံတား…. ရန်ကုန်မြို့အမွေအနှစ်တံတားလေးဟာဖြင့် မြောက်ဥက္ကလာ ဝင်ဝင်ချင်းလေးမှာ သဘာဝအတိုင်း ယိုယိုယွင်းယွင်းလေး အလှမပျက်စွာနှင့် ရန်ကုန်မြို့ခရီးသွားပြည်သူများသာမက ကမ္ဘာအရပ်က ခရီးသွားပြည်သူများကိုပါ စောင့်ကြိုလျက်ရှိ နေပါသည်။တံတားပေါ်တက်ရောက်သော ယဉ်များအန္တရာယ်ကင်းဝေးနိုင်ရေးအတွက်လည်း လမ်းဝတံတားခြေရင်းနားမှာ မီးသတ် ဌာနကြီးတစ်ခု တည်ဆောက်ပေးထားပါသည်။ တံတားပေါ်တက်နေစဉ် ရုတ်တရက် တံတားပြိုကျခဲ့သော် အရေးပေါ် အစီအစဉ်အနေဖြင့် […]
ခရီးသည်နဲ့ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတို့ မမျှော်လင့်ဘဲ ရုပ်တူနေတဲ့ အဖြစ်အပျက်(ရုပ်သံ) တကယ်ကို အံ့အားသင့်သွားစေခဲ့ပါတယ်…တူတာကလဲ တစ်ယောက်ထဲလားကို မှတ်ယူရပါတယ်… … ။ အင်ဒိုနီရှားနိုင်ငံမှာ Grab ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသမားတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ ရုပ်နဲ့ တစ်ထေရာတည်းတူနေတဲ့ ခရီးသွား ဧည့်သည်တစ်ယောက်ကို မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ပုံစံနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ် …. ။ […]
June 19, 2019 Cele Love 0
သမီးဖြစ်သူရဲ့ မင်္ဂလာဦးည ဖြတ်သန်းပုံကို အမေဖြစ်သူ ကြားပြီး သတိလစ် …. သမီးဖြစ်သူ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအပြီး အမေဖြစ်သူက “ သမီး မင်္ဂလာဦးည ဘယ်လိုဖြစ်လဲ အမေ့ကို ပြောပြပါအုံး …” ပြောရမှာ ရှက်ရင် စကားဝှက်သုံးပြီး စာပို့လိုက်လေ…. ” ” ဟုတ် အမေ […]